Fandaharana mitondra ny lohateny hoe «Henoy ny feony» : Fanehoan-kevitra mikasika lohateny samihafa, tarafina amin'izay ambaran'ny Soratra Masina manodidina ny fanabeazana ny tanora.
Radio ACEEM - 103.4 FM
Sabotsy amin'ny 06.30 maraina
Famerenana: Alatsinainy amin'ny 08.05 alina
Radio Teny Fiainana (RTF) - 91.2 FM
Alatsinainy amin'ny 08.00 alina
Famerenana: Zoma amin'ny 08.05 alina
ACEEM Radio - 103.4 FM
Sabotsy: 6.30 maraina
Famerenana: Alatsinainy 8.05 alina
RADIO TENY FIAINANA - 91.2 FM
Alatsinainy: 8.00 alina
Famerenana: Zoma 8.05 alina
Radio feon'ny Mpitily - 92 FM
Sabotsy: 9.30 alina
Famerenana: Alatsinainy 5.30 hariva
Radio Université (RU) - 91.4 FM
Alarobia: 5.30 hariva
Famerenana: Sabotsy amin'ny 5.30 hariva
Radio FAHAZAvaNA Mahajanga - 86.6 FM
Alatsinainy: 10.00 maraina
Famerenana: Sabatsy amin'ny 10.00 maraina
Radio Ny Antsika (RNA) - 94.2 FM
Alahady amin'ny 07.00 alina
Ireo Lohahevitra efa nandeha tamin’ny fandaharana azonao henoina :
ANTSAMPANAHY (Oktobra 2018)
Fanadihadiana momba ny AKAMA
Ny Vehivavy sy ny Fitiavan-tanindrazana
Tsy misy antony tokony hatahorana
Ny mahakasika ny fandaharana 'Henoy ny feony' taona 2019
FIFANINANANA KRISMASY 2018 HERINANDRO FAHAROA
FIFANINANANA KRISMASY 2018 HERINANDRO VOALOHANY
Ireo tsara ho fantatra mahakasika ny fifaninanana Krismasy karakarain'ny FEON'NY FILAZANTSARA amin'ity volana Desambra 2018 ity
Dinidinika manodidina ny Zaikaben'ny FKTLM Nasionaly hatao any TOLIARA (Oct 2018)
Santionany amin'ireo Toriteny tany amin'ny Zaikabe FIFIL Nasionaly Diego Aout 2018
Santionany amin'ireo Toriteny tany amin'ny Isantaonan'ny Tobilehibe Ankaramalaza
Jobily faha 25 taonan'ny Toby Fiadanana Fiaferana
Fandaharana manokana-Zaikabe Nasionaly FKTLM hatao any Toliara ny volana Oktobra 2018
Akon'ny Fankalazana ny Faha 500 taonan'ny Reformasiona sy ny faha 150 taonan'ny FLM ary ireo lafin-kevitra mahakasika ny Pentekosta
Tohin'ny Fankalazana ny faha 500 taonan'ny Reformasiona sy ny Faha 150 taonan'ny FLM
Ireo lafin-kevitra samihafa momba ny Paska
Akon'ny fankalazana ny faha 500 taonan'ny Reformasiona sy ny faha 150 taonan'ny FLM
FIFANINANANA KRISMASY 2017
Ny Reformasiona sy ny Fifohazam-panahy
Ny Reformasiona sy ny Tanora
Vaovao mahakasika ny faha 500 taonan'ny Reformasiona sy ny faha 150 taonan'ny FLM
Ny Reformasiona sy ny fifandraisana @ fanjakana ary ny fiantraikany @ fiarahamonina
Ny Fitiavan'Andriamanitra - Ny Fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny fiainan'ny mino noho ny asan'ny Fanahy Masina.
- Ny Fitiavan'Andriamanitra tao amin'I Jesosy nanolotra ny ainy ho fanavotana izao tontolo izao.
- Ny Fitiavan'Andriamanitra naniraka ny Zanani-lahy Tokana tamin'izao tontolo izao
Fanazavana mikasika ny "Fifaninanana Krismasy 2014"
058-Ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiava-namana
Ny vola sy ny harena, ahoana hoy ny Baiboly! Ny tokony ho toerany eo amin'ny Kristiana
Ny fiantraikan'ny kolikoky
Pentekosta; Asan'ny Fanahy Masina
Ny kolikoly sy ny fiainana kristiana: ny iatrehana sy iadiana aminy
Paska: 1- Fanafahana; 2- Fanavotana; 3- Fandresena; 4- Fananganana
Ny fanetren-tena sy avonavona amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra
Tanora kristiana sy ny fahalalam-pomba ary ny fahaiza-miaina
Ahoana izany hoe kristiana tanora, fanasina sy fahazavana izany!
Lahatra sy anjara hoy ny kristiana, vintana hoy ny tsy kristiana, ,ny filokana (PMU, mampiady akoholahy, ...) Ahoana hoy ny Baiboly!
Anjara sa lahatra ny vady!
Fizahan-toetra sy fakam-panahy
- Ny fifohazam-panahy, - Ny Fibebahana
PENTEKOSTA: Ireo lafin-kevitra manodidina ny Pentekosta, ny vokatry ny Asan'ny Fanahy Masina; ny Fifohazam-panahy sy ireo tobim-pifohazana
Ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty
PASKA-Ireo lafin-kevitra manodidina ny Paska
Tanora sy ny asa fivelomana
Ny tanora sy ny hoaviny eo amin'ny sehatry ny asa fivelomana, manomboka amin'ny ambaratonga faharoa
Krismasy toa inona no andrasanao amin'izao krismasy izao!
Ny toeran'ny Fiangonana amin'ny fiainana kristiana
Ny toeran'ny Tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana kristiana
Ny fiainana kristiana amin'ny ankapobeny
Ny toeran'ny vavaka eo amin'ny fiainana kristiana
Ahoana no ahatongavan'ny olona iray ho kristiana!
Ahoana no handresena amin'ny anaran'i Jesosy
Fampahafantarana ny amin'ny Karemy sy ny Paska
Fanjakan'ny sabatra sy fanjakan'izao tontolo izao, ahoana no iainan'ny tanora ireo?
Ny hoavin'ny tanora malagasy an-tanàn-dehibe
Ny anjara-toeran'ny fitsipi-pitondran-tena eo @ tanora
Mitondra ny tanora malagasy ho tompon'andraikitra eo amin'ny fiainany ve ny tontolo misy azy sy ny fanabeazana
Ny toeran'ny hira sy mozika ary dihy eo anivon'ny finoana kristiana
Fizahan-toetra sy fakam-panahy: ahoana no iatrehan'ny tanora azy?
Planin'Andriamanitra amin'ny fiainanao sy ny ankohonanao ary izao tontolo izao
Tontolo iainana: fiantraikany amin'ny fiainana andavanandro
Azo ihoarana ve ny takaitra azo tamin'ny fahazazana?
Ny tanora sy ny marika (repère) hanombanany sy handrefesany ny fizotry ny fiainany @ ankapobeny
Kolontsaina malagasy sy ny fivavahana kristiana
Ireo lafin-kevitra samihafa manodidina ny krismasy
Saina sy fahalalana sa Fanahy sy fahendrena?
Fanomanan'ny tanora ny hoaviny manomboka eo amin'ny ambaratonga II
Fifandraisan'ny ray aman-dreny sy zanaka
Tanora sy ny zava -mahadomelina
Tanora sy ny fialam-boly
Fitiavana sy fanambadiana
Fianarana sy ny ady amin'ny fahantrana
Radio Ny Antsika (RNA) - 94.2 FM Alahady amin'ny 07.00 alina
Radio Teny Fiainana (RTF) - 91.2 FM Alatsinainy amin'ny 08.00 alina
Ilay Mpiandry ondry kely
Fomba hahazoana ny horonan-tsarimihetsika
1. Azonao atao ny mividy : horonan-tsarimihetsika (VCD/DVD).
2. Azonao atao koa ny manofa : horonantsary iray : 600 Ariary (fe-potoana : iray herinandro).
3. Mety azo ampiasaina maimaimpoana koa anefa ireo horonan-tsarimihetsika ireo raha toa ka Sekoly, Fikambanana, Fiangonana mpiara-miasa (na sampana ao aminy) amin'ny asa Fitoriana ny Filazantsara izay ataony, ka hanatanterahany "Film-Débat". Misy dinika manokana mialoha hatao miaraka @ ireo tompon'andraikitra, hametrahana fiaraha-miasa matotra.
Raha mila fanampim-panazavàna ianao dia manatòna mivantana ao @ foiben-toeran'ny Feon'ny Filazantsara na miantso an-tariby na koa manoràta mivantana aty aminay.
Ny Feon'ny Filazantsara dia manana horonan-tsarimihetsika kristiana maromaro, izay azon'ireo mpitory ny Filazantsara ampiasaina, mba hampahomby bebe kokoa hatrany, eo amin'ny sehatra samihafa izay misy azy ireo, ny asa Fitoriana ny Filazantsara izay ilofosany.
Azon'ny olona tsirairay na fianakaviana izay liana amin'izany ampiasaina ho azy manokana na eo amin'ny sehatry ny tokantrano koa anefa ireo fitaovana ireo.
Lohateny miisa 10 no misy amin'izao; tantara maneho trangam-piainana amin'ny andavanandro no hita amin'ireo horonan-tsarimihetsika ireo, toy ny manodidina ny fetin'ny Krismasy, ny Paska, ny fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny fiatrehana fotoan-tsarotra manokana eo amin'ny fiainana (aretina, sns...), ny ady amin'ny zava-mahadomelina sy ny maro hafa.
Ny fikendrena amin'izany dia ny hampieritreritra izay mijery ireo horonantsary ireo, indrindra ireo izay mety ho efa nandalo ny trangam-piainana mitovitovy amin'izay tantarain'ny horonan-tsarimihetsika ny hampahafantatra azy ireo fa matetika dia misy hafatra tian'Andriamanitra entina ho azy eo amin'ny toe-javatra samihafa izay mitranga eo amin'ny fiainany, ka hahatsapany ny halehiben'ny Fitiavan'Andriamanitra azy.
Ankoatr'izany dia azonao ampiasaina ho fampiorenam-pinoana ihany koa ireo horonan-tsarimihetsika ireo; afaka hanampy sy hitarika anao tokoa ireo hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny trangam-piainana izay mety hatrehinao, indraindray manahirana sy mavesatra. Tarafina amin'izay ambaran'ny Baiboly izany rehetra izany.
Tsara ny manamarika fa mbola amin'ny fiteny Frantsay ny ankabeazan'ireo horonan-tsarimihetsika ireo. Telo (3) no efa voadika amin'ny fiteny Malagasy amin'izao fotoana izao: "L'inconnu na Ilay olon-tsy fantatra ", "Chaque moment est un cadeau na Ny isan'andro iainantsika dia fanomezana", "Le petit berger na Ilay mpiandry ondry kely". Hiezaka ny handika miandalana amin'ny fiteny Malagasy ireo sisa hafa ny Feon'ny Filazantsara.
Endrika VCD na DVD no isehoan'ireo fitaovana ireo.
RADIO ACEEM FM 103.4 Sabotsy amin'ny 06.30 maraina
Famerenana : Alatsinainy amin'ny 08.05 alina
« Henoy ny feony » Fanehoan-kevitra mahakasika lohateny samihafa, tarafina amin'izay ambaran'ny Soratra Masina manodidina ny fanabeazana ny tanora.
Manasa anao hisoratra anarana mba ho afaka hihaino ireo horonam-peo maro be. Tsindrio eto
Ianao no mpitsidika faha 49606